Dhagayso+Sawiro:- Gudoomiye Tigey ” Hawiye Gaalkcyo laguma Dilo karo ‘Daroodna Gaalkcyo laguma dilo karo Gal-Mudug & Pl wa Heshiyeen ”
Magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug waxaa markii ugu horeysay maanta ka dhacay Kulan u dhexeeya maamulada Galmudug iyo Puntland ee magaaladaas, kaas oo ku saabsan nabadgeliyada iyo amaanka labada dhinac. Kulankaas ...
DEG DEG :- Qaraxyo Ruxay Xaafada Isli iyo somalida oo kala Carar kujira
Wararka ka imaanaya dalka kenya ,gaar ahaan xaafada somaalida ku badantahy ee Isli ayaa shegaya in uu kadhacay labo qarax oo khasaare geeystay. Qaraxan ayaa lala eegtay Hotel Xamdi oo ku ...
Dhagayso:- Wararkii Ugu Dambeyeey ee Baydhabo iyo Xasan sheekh oo diiday inuu la kulmo Madaxda Maamulada Lixda & Sadexda
Madaxda dowladda Soomaaliya ayaa maalintii labaad shirar gaar gaar ah ka wada magaalada Baydhabo, halkaasoo dhowaan looga dhawaaqay Madaxweynayaal labo maamul oo iska soo horjeeda. Gudoomiyaha Baarlamaanka Prof. Jawaari ayaa goor ...
Ra”iisul Wasaare C/weli oo safar qarsoodi ah ku tagay Baydhabo
Waxaa galabta safar an la shaacin ku Tagay Bayadhabo Ra"iisul Wasaaraha Xukumadda somaliya C/weli sheekh Axmed Maxamed. Dhinaca Kale Seddexda Mas’uul ee ugu sareysa dalka ayaa looga fadhiyaa inay xal rasmi ...
DEG DEG :- Madaxweyne Xasan sheekh & Ergayda Maamulka Lixda Gobal oo shir Xasaasi ah Baydhabo uga socdo
Gudoomiyaha barlamaanka somaaliya Maxamed sheekh Cusmaan jawaari ayaa saaka booqday xarunta ADC oo ah xarunta lagu dhisay Maamulka Lixda gobal,isagoo halkaas kula kulmay madoobe Nuunow Maxamed. Kulanka dhexmaray Gudoomiye Jawaari iyo ...
Dhagayso:- Xildhibaan dalxa oo ka hadlaya go’aankii baarlamanka ee Maaliyada & Maamulka 2 Shabeele
Ka dib markii Baarlamaka Dowlada dhexe ee Soomaaliya ay qaateen go’aanka ah in aan lacag laga saari karin bangiga dhexe ee Soomaaliya ilaa la ogeysiiyo gudiga maaliyada ee Baarlamanka ayaa ...
Dhagayso+Sawiro:- Madaxweyne Gaas oo Maanta Furay Kalfadhiga aan caadiga aheyn ee golaha wakiilada
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdi-weli Max’ed Cali Gaas Oo Furay Kal-Fadhiga Baarlamaanka Ee Aan Caadiga Ahayn Kaasi Oo Dib Loogu Eegayo Miisaaniyadda Dawladda Ee 2014. Isniin 31, 03, 2014 Madaxweynaha Dawladda ...
Dhagayso+Sawiro:- Maamulka Puntland oo qabtay Rag Al-Shabaab Katirsan iyo Walxaha qarxa
Maamulka Puntlad ayaa maanta shegay inay gacanta ku dhigeen rag lala xiriirinayo Kooxda Al-Shabaab&qalabka loo adeegsado walxaha qarxa. Ciidamada Amaanka Magalooyinka Puntland howlgalo ay sameyeen isla markana ay ka sameyeen magaalooyinka ...
Dhagayso:- Top News Xasan sheekh oo xalay Baydhabo seexday & Maamulka Madoobe Nuunow oo diiday inay la kulmaan Xasan sheekh
Waxaa shalay gaaray magaalada Baydhabo wafdi uu hogaminayeey Madaxweynaha somaaliya Xasan sheekh Maxamuud. Xalay wafdiga Madaxweynaha waxay ku hoydeen Magaalada baydhabo waxaana ay si kala gaar gaar ah ula kulmeen saraakisha ...
Dhagayso:- RW C/weli oo hortagaya Barlamaanka Somaaliya Maanta
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya C/wali Sheekh Axmed Maxamed ayaa saacadaha soo socda lagu wadaa inuu hor tago Golaha Baarlamaanka, si uu uga hadlo qorshe howleedka Xukuumadiisa u degsan iyo waxyaabaha hor-yaala ...